ပခုံး နာနေတာ လည်ပင်းကြောင့်လား | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ပခုံး နာနေတာ လည်ပင်းကြောင့်လား
ပခုံး နာနေတာဟာ တကယ့်ပခုံးပြဿနာ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မှာပါ။ လည်ပင်း နာနေတာကလည်း တကယ်လည်ပင်းပြဿနာ ဟုတ်ပါ့မလား?
>> နည်းနည်းများ ရှုပ်သွားပြီလား?
ပခုံးနာပြီးလာတဲ့ လူတစ်ယောက်မှာ လည်ပင်းပြဿနာ ရှိနေတာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက် ခန္ဓာကိုယ်က နာကျင်မှုကို ခံစားတဲ့ပုံစံဟာ ထူးဆန်းပါတယ်။ လည်ပင်းနာကျင်မှုနဲ့ ပခုံးနာကျင်မှုတို့ဟာ ထွေးလျောယှက်တင်ရှိတတ်တာမို့ ပေါင်းပြီးပြောလေ့တောင် ရှိတတ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လည်ပင်းနဲ့ ပခုံးရဲ့ အာရုံကြောစနစ်တွေဟာလည်း ဆက်စပ်နေလို့ပါပဲ။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ တစ်ခုခုဖြစ်တဲ့အခါ နာကျင်မှုကို ဘယ်နားကနေခံစားနေရလဲဆိုတာကို ဦးနှောက်က လိုက်ရှာရ ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ ဒါကို လွှဲပြောင်းနာကျင်မှုလို့ ခေါ်ပါတယ်။
>> ပခုံးဒဏ်ရာလို့ ပြောဖို့ဆိုရင် …
ပခုံးနာကျင်မှုဟာ များသောအားဖြင့် ပခုံးလှည့်ကြွက်သားတွေ ဒဏ်ဖြစ်တာကြောင့် များပါတယ်။ ဒီပခုံးလှည့်ကြွက်သားတွေဟာ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှလိုက်ပြီး ဒဏ်ဖြစ်တတ်ကြပြီး အလွယ်တကူ ထိခိုက်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုဒဏ်ဖြစ်တဲ့အခါ ပစ္စည်းတွေကို ကောက်ယူဖို့၊ လှမ်းယူဖို့ တခြားကြွက်သားအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုကြရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ပခုံးရော၊ လည်ပင်းပါ နာကျင်လာတာပါ။ တကယ်လို့
● ပခုံးကိုယ်နှိုက် ဒါမှမဟုတ် လက်မောင်း အပေါ်ပိုင်းမှာ နာကျင်မှုဖြစ်လာရင်
● အပေါ်ကိုလှမ်းချိန်၊ လက် နောက်ပစ်ချိန်၊ ပစ္စည်း မချိန်တွေမှာ နာကျင်လာရင်
● လက်မောင်းအပေါ်ပိုင်းသာ နာကျင်ပြီး တံတောင်ဆစ်ကျော် မနာရင်
● ညဘက်တွေမှာပါ နာကျင်နေရင်
● လက်ကို အနားယူလိုက်ရင် သက်သာသွားရင်
ပခုံးလှည့်ကြွက်သားဒဏ်ဖြစ်တာ၊ တခြားပခုံးပြဿနာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
>> လည်ပင်းဒဏ်ရာလို့ ပြောဖို့ဆိုရင် ...
လည်ပင်းမှာရှိတဲ့ အာရုံကြော ၁၄ ချောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အဆစ်၈စုံပဲဖြစ်ဖြစ် ရောင်ရမ်းခြင်းကြောင့် လည်ပင်းနာကျင်တတ်ပါတယ်။ လည်ပင်းအဆစ်တွေ၊ ကျောရိုးဆစ်တွေဟာ ခေါင်းညိတ်၊ ခေါင်းခါ လုပ်တဲ့အခါ တံခါးပတ္တာလိုမျိုး ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အလွယ်တကူ ဒဏ်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ တကယ်တမ်းတော့ အသက် ၆၅ နှစ်အရွယ် ရ၀% လောက်ဟာ လည်ပင်းဆစ်တစ်ဆစ်ဆစ်မှာ အဆစ်ရောင်ဝေဒနာ ခံစားရတတ်ပါတယ်တဲ့။
တစ်နေရာရာမှာ နာကျင်မှုဟာ တခြားတစ်နေရာရာနဲ့ ရောရှုပ်တတ်တာကြောင့် သေသေချာချာ စမ်းသပ်စစ်ဆေးဖို့ လိုပါတယ်။ တကယ်လို့
● ပခုံးထိပ်တွေထိ ပြန့်ပြီးနာလာတယ်၊ လည်ပင်းတစ်ခြမ်းနားတစ်ဝိုက်နာတယ်ဆိုရင်
● လျစ်စစ်တို့သလိုစစ်ခနဲ၊ ပူခနဲ၊ ကျဉ်ခနဲနာနေရင်
● တံတောင်ဆစ်ကျော်ပြီး လက်ထဲထိ နာလာရင်
● လည်ပင်း လှည့်လိုက်ရင်၊ ဆန့်လိုက်ရင် လက်မောင်းတစ်လျှောက်ကို နာတာ ပြန့်သွားရင်
● လည်ပင်းကို ထိန်းထားရင် သက်သာရင်
အဆစ်ရောင် ဒါမှမဟုတ် အာရုံကြောဆိုင်ရာ လည်ပင်းနာခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် လည်ပင်းနဲ့ပခုံးနဲ့ကို သေချာစစ်ဆေးကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။ ထုံဆေးလေးကို ပခုံးထဲဖြစ်ဖြစ်၊ လည်ပင်းအဆစ်တွေ၊ အာရုံကြောတွေထဲဖြစ်ဖြစ် ထိုးထည့်ပြီး စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ထိုးပြီးနောက် နာတာ သက်သာလာရင် ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့နေရာမှန်း သိနိုင်တာပေါ့။
>> ပခုံးပြဿနာကြောင့် နာကျင်တာတွေကို သက်သာစေဖို့ နည်းလမ်း (၅) သွယ်
1. နာတာ ပိုဆိုးစေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ခဏနားထားခြင်း
2. ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ခြင်း
3. ညဘက်တွေမှာ ပခုံးကို ရေခဲကပ်ခြင်း
4. အရောင်ကျဆေးတွေ ပေးခြင်း
5. ပခုံးရောင်ရမ်းတာတွေ သက်သာဖို့ ကော်တီစုန်းထိုးဆေးထိုးခြင်း စတာတွေ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်းတွေနဲ့သာ မသက်သာခဲ့ရင်တော့ ပခုံးကို သံလိုက်ဓာတ်မှန် ရိုက်ကြည့်ပါ။ ပခုံးလှည့် ကြွက်သားပြဲနေတာကို တွေ့ရင်တော့ ပခုံးခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ဖို့ လိုနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ လည်ပင်းအဆစ်ရောင်တာကြောင့်၊ အာရုံကြောပြဿနာကြောင့် ဆိုရင်တော့ ကျောရိုးဆစ်အထူးကုဆရာဝန်နဲ့ ပြကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကျောရိုးဆစ် အထူးကုဆရာဝန်က အာရုံေကြောစမ်းသပ်မှုနဲ့ ဓာတ်မှန်အမျိုးမျိုး ရိုက်ကြည့်ပါလိမ့်မယ်။
>> လည်ပင်းနာကျင်မှုကို သက်သာစေဖို့ နည်းလမ်း (၄) သွယ်ကတော့ -
1. လှုပ်ရှားမှုနဲ့ သန်မာမှုကောင်းစေဖို့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ကုထုံးတွေ၊ ယောဂကုထုံးတွေ ပြုလုပ်ပေးခြင်း
2. အရောင်ကျဆေးတွေ၊ ကြွက်သားပြေလျော့ဆေးတွေ သောက်ပေးခြင်း
3. ရေခဲကပ်၊ အပူကပ်၊ နှိပ်နယ်ပေးခြင်း
4. ရောင်ရမ်းမှုတွေ နာကျင်မှုတွေ သက်သာစေဖို့ ကော်တီစုန်းထိုးခြင်း၊ ထုံဆေးထိုးခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် လည်ပင်းနာ၊ ပခုံးနာရင် မပေါ့မလျော့ဘဲ ဆရာဝန်နဲ့ပြသဖို့ လိုပါတယ်နော်။ ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ သေချာရှာဖွေပြီး ကုသဖို့လိုပါတယ်။
၁၉.၁.၂ဝ၂ဝ | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
အခုခေတ်မှာ အလုပ်အကိုင်တွေ၊ လူမှုဆက်ဆံရေးတွေ၊ ငွေရေးကြေးရေးတွေကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း စိတ်ဖိစီးမှုတွေခံစားနေရတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဖျားနာဝေဒနာတွေ၊ သမီးရည်းစားပြဿနာတွေလိုမျိုး ဘဝရဲ့ထိုးနက်ချက်တွေကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ရောစိတ်ပါ နွမ်းလျလာတတ်ပါတယ်။
ကျောက်ကပ်မှာ ကျောက်တည်ပြီဆိုပါတော့။ ကိုယ့်ဘာသာ ဂရုတစိုက် ဆင်ခြင်ရမယ့် အချက်တွေရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ -
● ရေများများ သောက်ရမယ်။
● အစားအသောက်ကို ရွေးစားရမယ်။
ကျောက်ကပ်မှာ တည်တဲ့ကျောက်အမျိုးအစားက အများကြီး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
● Calcium stone အဖြစ်အများဆုံးကျောက် အ...